Iinqwenela kunye nezinto zokwazi malunga ne-typography | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iinqwenela kunye nezinto zokwazi malunga ne-typography
-I coca-cola ilogo ayenzelwanga kwifonti kodwa ivela kuhlobo lochwethezo
- Ixabiso elifanelekileyo le- amagama emgceni Kufanele ukuba ibe ngamagama alishumi elinambini, kwaye ayicetyiswa ukuba ibe ngaphantsi kwesibhozo kwaye ingagqithi kwishumi elinesithandathu. Into eyenzayo kufuneka ibe phakathi kwabalinganiswa abangamashumi amane anesithandathu kumgca ngamnye. Xa umodela iincwadi zezifundo okanye iinoveli, kunzima ukubala inani loonobumba abafaka kuyo nganye, hehe!
-A thoba Ukungalingani kwenza ukuba umgca ofanayo ufundwe kabini.
- Umthombo IHelvetica yenzelwe nguMax Miedinger ngo-1957, kwaye yayinguye kuphela typography isetyenziswe yintshukumo ye-typographic yaseSwitzerland kangangexesha elithile.
- Uhlobo lokuchwetheza Ukukhanya kwe Windsor kuKhanye Isetyenziswe phantse kuzo zonke iindidi zayo ngumlawuli wefilimu owaziwayo Woody AllenUngayibona kwiimovie zakhe nakwiincwadi zakhe.
- UClaude Garamond, Umyili wefonti enegama lakhe, njengamagcisa amakhulu, wasweleka eneminyaka engama-81 kwintlupheko ngelixa indalo yakhe iyeyona isisiseko kuyilo lwamaxesha amva.
-Uyazi ukuba kukho ifilimu ebhaliweyo malunga ne-Helvetica typography? Ukuba unomdla wokuyibona, unokufumana kwi esi sixhobo.
-Ukufumana ifayile ye- thoba amanqaku aneleyo, hlula umlinganiso womgca kwizangqa ngu ubungakanani bomzimba ngamanqaku.
Ifonti esetyenziswa ngoku ngu-Apple ngumahluko kwi I-Adobe Myriad.
- Ukwenzela i Imixholo yamaphephandaba nemibhalo engezantsi Inkqubo ebizwa ngokuba yiFibonacci isetyenzisiwe (yenziwe ngumbhali wayo malunga nonyaka we-1.200), equlathe ulandelelwano lwamanani apho inani ngalinye lisisixa samanani amabini angaphambili.
imifanekiso: yiya cinema, isithuba
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iinqwenela kunye nezinto zokwazi malunga ne-typography
Iincwadi ezi-20 zaBantwana eziBalaseleyo eziValiweyo
GoCart, i-E-Commerce esekwe kwiKhowudiIgniter